भाग्यमानीले मात्र देख्ने नागको अण्डा : ॐ लेखी सेयर गरेमा सबै मनोकामना पुरा हुनेछ ! – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/भाग्यमानीले मात्र देख्ने नागको अण्डा : ॐ लेखी सेयर गरेमा सबै मनोकामना पुरा हुनेछ !
ना*गको अ* ण्डा त धेरैले देख्नु भएकै होला तर यस्तो दुर्ल* भ अ* ण्डा भने पहिलो पटक कसैले तस्बिर लिन सफल भएको हो। शिव भगवानको गलामा बास पाएको उक्त ना*गलाइ हामीले ना*ग देवताको रुपमा पुजा गरेको पाइन्छ। यस्ता ना*ग देवताको कोख बाट निस्केको उक्त दुर्ल*भ अ(ण्डा निकै नै भाग्यसाली मानिसले मात्र देख्न पाउने बताइएको छ। यो अ*ण्डा आम अ* ण्डा भन्दा फरक केहि बढी चम*कदार र ठुलो हुने बिज्ञ हरु को भनाइ छ। लाखौ ना* ग हरुमा केवल १ ना* गमा मात्र यस्तो अ* ण्डा परमे क्षमता रहेको बताइएको छ। यो हेरेर १० जना सामु पुराइदियेर सबैलाइ भगवानको दर्शन गराई पुण्य प्राप्त गरौ।
आ* धिम समयमा भन्दा अहिले प्रकृति पू* जनको वि* धि केहि फे* रिएको भएपनि प्र* कृति पु* जन मानव समुदायको अहम हिस्सा रही आएको छ । देश, का* ल, वातावरण तथा प* र्याव* रणमा आएको परिवर्तन अनुसार पूजा, उपासना तथा साधना गर्ने पद्धति भने फरक फरक रही आएका छन् । प्रा* चीन समयमा मानवको उ* त्प* त्ती भएसंगै अहिलेको यस वि* कसित समय सम्ममा धेरै कुराहरुमा फे* र बा* दल भयो तर पनि प्रकृति पु* जन भने मानव समुदायको हि* स्सा बनि नै रह्यो । हिन्दू धर्म तथा दर्शनमा प्रकृति लगायतका स* मस्त विश्व कल्याणको लागी विभिन्न किसिमका उ* पा *सना तथा प्रार्थाना गर्ने गरिएको छ । भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । यस्ता उपासना र अ* नुस्ठा* नको भि* त्रि उ* द्धेश्य भनेको नै वातावरणीय तथा प* र्यावरणीय स* न्तु* लनलाई का* यम राखी राख्ने रहेको देखिएको छ। हरेक स* मुदायले प्रकृतीलाई मु* ख्य ध* रोह* र मान्ने गरेको छ । मानिसको जीवन प्रकृति मै नि* र्भर हुने भएको कारणले गर्दा पनि मानव जीवनमा प्रकृतिको ठुलो दे* न रहेको पाइन्छ । हिन्दु धर्ममा त प्रकृतिलाई निकै अ *ह* म देवताको रुपमा हेर्ने गरिन्छ ।
कतिपय हिन्दू राजाहरुले त आफूलाई प्रकृति पूजनको आ* स्थाकै कारणले गर्दा पनि सूर्यवं* शी, चन्द्रवं* शी तथा नागवं* शी भनेर आफूलाई परिचित गराउने गरेको पाइन्छ । यसबाट नै हिन्दु ध* र्ममा प्रकृतिको लागी रहेको मान सम्मान पु* ष्टि हुन्छ । हिन्दु धर्ममा प्रकृतिको हरेक स्व* रु* पलाई देवी देवता मा* नी पु* ज्ने गरिएको छ ।प्रकृतिपू* जा तथा उ* पास *नाको परम्परामा हिन्दूहरुले म* नाउने गरेको नागप* ञ्चमीले पनि प* र्याव* रणीय म* हत्वलाई झ* ल्काउँछ भने यसका साथै अर्कोतिर यसले हिन्दू धर्मको दा* र्शनिक प* क्षलाई पनि स* म्झाउँछ । सि* धा भाषामा भन्दा नाग भनेको स *र्प नै हो । स* र्पले प्रकृतिमा भएको वि* षाक्त त* त्वहरुलाई आफूमा ग्रहण गरेर प्रा* कृतिक स *न्तुलनलाई कायम राख्न म *द्दत गर्दछ । हिन्दूहरुले अ* मृत स* मान दुध दिने गाईलाई आमा स* मान मानेर पूजा गरे जसरी नै वि *ष ओ* क*ल्ने सर्पको समेत पुजा गर्ने गरेका छन् । अहिले पनि भारत तथा नेपालमा आफूलाई ना* ग जातीका सन्तान मा* न्ने जातीहरु धेरै छन् । भारतमा त ना* गाल्या* ण्ड भन्न ठाउँ निकै प्र* ख्या* त छ । जातीय शा* स्त्रले पनि ना* ग जा* तीलाई मं* गोल मू* ल आ* दिबा* सी हुन भनेर व्या* ख्या गरेको छ ।
कोरोना संक्रमणबाट आमाको मृत्यु भएको ४ दिनपछि छोराको मृत्यु
दुइवटा श्रीमान राख्न मन छ , स्विकार्ला त यो समाज ? ,पूरा पढ्नुहोस !
भखरै भाग्य न्यौपाने मोटरसाईकलबाट दुर्घटना पुरा समाचार पद्नुहोस
गर्भवतीका लागि नयाँ एम्बुलेन्स खरिद गर्ने भरतपुर महानगरको तयारी चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले गर्भवती महिलालाई प्रसूति गराउन भरतपुर अस्पताल ल्याउन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले ए…